नेकपा कर्णाली विवादमानयाँ मोड, मन्त्रिपरिषद् हेरफेर धकेलियो ! – Gorkhali Voice
नेकपा कर्णाली विवादमानयाँ मोड, मन्त्रिपरिषद् हेरफेर धकेलियो !
१६ कार्तिक २०७७, आईतवार ०९:०७
काठमाडौ, कर्णाली प्रदेश सरकारमा तत्काल मन्त्री थपघट गर्ने तयारीलाई मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले केही समयका लागि थाती राखेका छन् ।
आइतवार लोकान्तरसँग कुराकानी गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीको विकासका लागि स्थायी सरकार आवश्यक पर्ने भएकाले तीनैपक्षलाई मिलाएर मात्र अघि बढ्ने बताए ।
मलाई केन्द्रबाट तत्काल मन्त्रिपरिषद्मा नयाँ नियुक्ति गर्न निर्देशन आएपनि म केही दिनका लागि प्रेसर थेगेरै भए पनि तीनै पक्षलाईमिलाएरै लैजान्छु । मिडियामा आएजस्तो आजै मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुँदैन,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘अहिले चर्चामा आएजस्तो दुईमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने योजनामा म छैन । सरकारका कारण नेकपा दुर्घटनामा पर्न हुँदैन । सबै पक्षलाई मिलाएर लैजान्छु ।’
मुख्यमन्त्री शाहीले आफू पार्टीको निर्देशन मान्न तयार रहेको बताउँदै अहिले नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हतारमा गरेर पछुताउने पक्षमा आफूनभएको बताए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाले आफूहरू राजीनामा नदिने बताएका छन् ।
लोकान्तरसँग कुरा गर्दै उनीहरूले आफूहरूले कुनै गलत काम नगरेको र कुनै गलत काम नभएको खण्डमा राजीनामा दिने कुरा असम्भवभएको बताए ।
यसअघि प्रचण्ड खेमा भनेर मुख्यमन्त्री शाहीसहित पूर्व माओवादी, नेपाल खेमामा भनेर प्रकाश ज्वाला पक्ष र ओली खेमा भनेर नेतायामलाल कंडेललगायतलाई चिनिँदै आएको थियो ।
नेता यामलाल कंडेल पक्षका भनेर चिनिएका ६ जना सांसदहरूले आफूहरू यामलाल गुटको नभएर ओली पक्षको भएको बताउँदैकंडेलको इशारामा नचल्ने बताएका छन् ।
नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक सांसदले लोकान्तरसँग भने, ‘कंडेलले भनेर मात्रै मात्रै हामी कर्णालीमा अस्थिरता निम्त्याउन चाहँदैनौं ।कर्णालीको विकास चाहन्छौं, परिवर्तन र समृद्धि चाहन्छौं । यहाँ अस्थिरता र नेपाली राजनीतिको रणमैदान बनाएर कर्णालीको बेइज्जतगर्ने पक्षमा छैनौं,’ ती सांसदले भने, ‘केही दिनमा हामी काठमाडौं जान्छौं र प्रधानमन्त्री ओलीसँग कंडेलजीको बारेमा कुरा गर्न तयार छौं ।’
यससँगै कर्णालीको विवादको निरुपण गर्ने जिम्मा मुख्यमन्त्री शाहीको काँधमा आइपुगेको छ । ज्वाला पक्षले तत्काल मन्त्रिपरिषद्हेरफेर गर्नुपर्ने बताइरहे पनि मुख्यमन्त्री शाही भने तीनै पक्षलाई मिलाएर अघि बढ्छु भन्नेमा पुगेका छन् ।
कंडेल पक्षका सांसदहरूमध्ये ६ जना सांसदले यही सरकारको निरन्तरता चाहिरहेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा ज्वालापक्षका ८, मुख्यमन्त्री शाही पक्षका १२ र कंडेल पक्ष भनेर चिनिएकामध्ये ६ गरी २६ जना संसद पुग्ने भएपछि यो निर्णयबाट मुख्यमन्त्रीकेही पछि सरेका हुन् ।
नेकपा कर्णाली प्रदेश संसदीय दलमा जम्मा ३३ जना सांसद छन् । सभामुख बाहेकका ३२ जना सांसदमध्ये मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमाअहिले २६ जना देखिएका छन् भने नेता कंडेलको पक्षमा ६ जना मात्रै देखिएका छन् ।
प्रचण्डले तेस्रो पक्षलाई पनि मिलाएर अघि बढ्न निर्देशन दिएकाले मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको तयारीलाई थाती राखेको स्रोतकोदाबी छ ।